Ethandwa kakhulu phakathi kwabantu bezama ukwenza ngcono izimpilo zabo, uyawuthanda isihloko ukudala izimoto ukukhanya uyakwazi travel off-road. ATVs, okuzenzela kuyizici kukhona amakhono ngenxa nokuthambekela Abadali zabo, okuholela ukuma ngazinye imoto ngayinye. Kulesi sihloko sibheka izakhi eziyisisekelo futhi izinhlobo imiklamo wadala amasampula. Isikimu eziyisisekelo ukusebenza izingxenye ezinyakazayo kukhona umshini drive ezinamasondo noma zithwalwe ngezinyawo.
Ziyakwazi ezivamile phakathi Wabasaqalayo Homebrew, ngenxa izindleko ephansi ekuklanyweni kanye ukudalwa imishini. Ngaphambili, iningi lawo lalingabantu ATV kokuba ilungiselelo amathathu, nge enophephela lamasondo angemuva. Okwamanje, steel kwande apparatuses 4x4, 6x6. Lokhu kungenxa amathuba ukudala indawo mnandi futhi ukwanda isisindo lezincwadi.
Lezi ATVs, okuzenzela kukhona more xaka mayelana kwazimoto futhi zidinga imali eshisiwe indalo yabo, kodwa amakhono tekusebenta babe eziningi eziwusizo kuqhathaniswa ne pneumatics. I kuyakhathaza, yebo, okungcono futhi maneuverability, futhi kuncishiswe ingozi lokulimala yezingxenye chassis.
Indlela uzenza snowmobile
Isinyathelo sokuqala siwukuba ukucacisa ngenhloso self-sezwe imoto okuphathelene nekusasa: ukucacisa umthamo zihlalo, isisindo esiphezulu nobukhulu balezi impahla emikhunjini ithuthwe, isikhathi kanye nemibandela yokusebenza. Lokhu kuzovumela ukuthuthukisa umqondo zedivayisi namakhono wawo ahlose ukuba usetshenziswe.
Isinyathelo esilandelayo ukuze ukhethe uhlobo ngamandla - ezinamasondo noma zithwalwe ngezinyawo. Ngaphezu kwalokho, ukucacisa isixazululo yayo kwesakhiwo: ku chassis ezinamasondo - nenani ehola futhi iphathwe amathaya ATVs ku amathrekhi - tape uhlobo, ubungako, indawo izinkanyezi ehola futhi wayiqondisa.
Ngemva msebenzi wokulungiselela ekugcineni ezikhethiwe noma ukuthi ekhiqizwa wesifunda isampula iqala ngokudala imidwebo ukusebenza yemishini esizayo.
Ngezinye izikhathi ezindabeni zezimali zibeka imingcele ethile ukukhetha okuholela ukusetshenziswa kuyini okuphansi kwesandla sakho. Ngokuvamile, kuba yizo izinjini izithuthuthu ubudala noma izimoto.
Uma kungekho izinkinga ngezimali yephrojekthi, ATVs okuzenzela kungenziwa ifakwe ezihlukahlukene powerplants, futhi wazibonela ka DIY ukuncoma kukho okulandelayo:
- womoya ayethanda izinjini yesimanje izithuthuthu, kubalulekile kuphela ukukhetha amandla oyifunayo kanye elihambisana izimo injini yokusebenza. Inketho omuhle kungaba uhlelo kokuba indlu ophoqelelwe, njengoba lihamba alisilungele kwezimo ezivamile ifriji.
- Amadivayisi ne drive abakhasi kufanele siqede izinjini zezimoto, kokuba ne-torque eliphezulu nokwethembeka tekusebenta okwanele. Lapho ekhetha carburetor noma udizili kufanele sinake kungenzeka kwethulwa yabo ezimweni yesithwathwa ezinzima, ngoba operation esitebeleni udinge ukufaka preheater. Ngesikhathi esifanayo, u-diesel kuyinto ukonga ngaphezulu.
Ukukhiqizwa kwamasondo kwi amathayi low-ingcindezi, ngokuvamile kufezwa ngokushintsha axube amadiski amabili nomunye Jumpers ku ihabhu. Top ingubo ikhamera bese ukukulungisa. Njengoba okungeziwe isivikelo umonakalo zangaphandle zingasetshenziswa phezu yimpandla ekamelweni ezengeziwe. ATV-okuzenzela imikhondo zingasebenzisa isikhombi ayatholakala emakhemisi shot snowmobile amathrekhi noma ekhiqizwa ngokuzimela. Ezimweni eziningi, le bendiza liyingxenye ye ibhande elihambayo nge lugs fixed kanye amathuba ukudlula ngamazinyo ilungu ushayela.
"Volkswagen Tiguan" - Ukucaciswa kanye nomklamo mina isizukulwane SUV
Ukukhiqizwa Management - kuyindlela ephumelela ukuphathwa kwebhizinisi ithuluzi
Konstantin Dovlatov: ukuguqulwa bushelelezi uqobo
Tea Maitre de: injabulo French kwelinye inkomishi
Iyini ukuthuthukiswa kwekhompyutha?